Facebook Archives - Myanmar News Market
သားယောင်္ကျား အမွှာလေး မွေးပေးလို့မိန်းမကို ဂုဏ်ပြုရမယ်လို့ယောကျာင်္း တွေးထားတဲ့ အတွေးတွေ ခုတော့လွင့် စင်ပပျောက် ကုန်ပြီ မိန်းမရေ…သမီးလေးရယ် သားလေးရယ် အမွှာလေးထဲက အကြီးကောင်လေးနဲ့ ယောကျားင်္တို့ကို မိန်းမထားခဲ့ ပီပေါ့ မိန်းမရယ် အမွှာသားအငယ်လေးကလဲ ဆုံး မိန်းမကလဲ ဆုံး ယောင်္ကျား ဘယ်လိုတွေ ဖြေသိမ့် ရမလဲ 10.9.2019 မနက်7နာရီ အချိန်မှာ မိန်းမ သားအမွှာလေး ၂ ယောက်ကို မွှေးပေးခဲ့တယ်နော် …ယောကျာင်္း ပျော်လို့မဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ် မိန်းမရယ် ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့သားယောကျာင်္းအမွှာလေး တွေဆိုတော့ပျော်တာပေါ့မိန်းမရယ်…ဒါပေမဲ့ ယောကျာင်္း အပျော်တွေ...
တစ်ဖက်သားက မိမိကိုကန်တော့ တော့မယ်ဆိုရင် ခုံပေါ်ကဆင်းတယ် ကန်တော့သူနဲ့ကြမ်းတစ်ပြေးထဲထိုင်တယ် ခြေထောက်မပေါ်အောင် ခြေထောက်လုံအောင် ခြေဖဝါးထိ လုံခြည်နဲ့ဖုံးအုပ်တယ်။ များသောအားဖြင့် နောက်မှီမထိုင်ဘူး မတ်မတ်ပဲထိုင်တယ် ဘုရား သံဃာ စသည်များကိုရှိခိုးပူဇော်ချိန်မှာ ခြေဖဝါးထိလုံအောင် လုံခြည်နဲ့သိမ်းအုပ်တယ်။ အစား အအိပ် နည်းပါးပြီး မျှတအာင်နေတယ်။ သွက်လက်တက်ကြွစွာ လမ်းလျှောက်တယ် ဟာသဥာဏ်ရွှင်တယ် မည်သည့်အခမ်းအနား မည်သည့်နေရာ မည်သူနှင့်တွေ့သည်ဖြစ်စေ ရင်းနှီးနွေးထွေးချစ်ခင်စေမှု့ရဲ့အစအဖြစ် အခြေအနေအချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီး ရီစရာလေးအနည်းငယ်ပြောတတ်တယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာအမျိုးသားဝတ်စုံကို ကျက်သရေရှိစွာ ထင်းလင်းအောင် ရိုးရိုးလေးဆင်မြန်းတယ် စသဖြင့်တွေပေါ့ ကျနော်အခုပြောတာ နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူး စည်းရုံးရေးမဟုတ်ပါဘူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသည်ဖြစ်စေ မထောက်ခံသည်ဖြစ်စေ လူငယ်တိုင်း လူကြီးတိုင်း အတုယူသင့်တဲ့အချက်တွေတင်ပြတာပါခင်ဗျာ။ အထက်မှာစတင်ပြောခဲ့သလို မြန်မာမလေးတွေအတုယူကြစမ်းပါလားလို့ Credit-Htet Wai Lwin
သတိပြုကြပါ မြန်မာပြည်သားအားလုံးအတွက် စေတနာနဲ့ အမုန်းခံပြီး ပြောပြပါရစေ
သတိပြုကြပါ <3 မြန်မာပြည်သားအားလုံးအတွက် စေတနာနဲ့ အမုန်းခံပြီး ပြောပြပါရစေ…😔 သတင်းစာသည် စားစရာအောက်ခံစက္ကူလုံးဝမဟုတ်ပါ စားစရာခံသည့်စက္ကူသီးသန့်ရှိပါတယ် သတင်းစာကိုရိုက်သော မှင် ကာဗွန်ဓာတ်များစားမိခြင်းသည် အဆိပ်ကို စားမိသည်နှင့်တူပါ၏ မုန့်ရောင်းသူများအနေဖြင့် စေတနာလေးပိုထည့်တာ စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးကို အလေးထားသင့်ပါသည် စားစရာခံသည့်စက္ကူလေးဝယ်၍ ထည့်ရောင်းကြပါ မြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်၂များများတွေ့ရမှာပါ သတင်းစာနဲ့မုန့်အောက်ခံ လုပ်ကြတာ တချို့ကိတ်မုန့်တိုက်တွေလည်းသုံးတာတွေ့ရပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်လျှင်မ၀ယ်စားပါနှင့် ငှက်ပျောရွက် သို့ သီးသန့်စက္ကူဖြင့်ခံရောင်းမှသာ ၀ယ်စားပါ မြန်မာတနိုင်ငံပဲ့ရှိပါလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ဒီလိုသတင်းစာကြီးနဲ့မုန့်ထည့်ထားတာတချို့ဆီကြော်မုန့်တွေမှာဆို သတင်းစာက ကပ်ပါလာတဲ့ စာလုံးမှင်အရိပ်တွေတောင်ရှိပါတယ် အလွယ်မကြိုက်ကြပါနဲ့ ပြုပြင်ကြပါ ကျန်းမာရေးအသိအဆင့်အတန်းမြင့်သော နိုင်ငံဖြစ်ကြပါစေဟု….. စိတ်သန်လျက်…ပြင်ရန်မလွယ်နိုင်ဟုသိပါသော်လည်း ၁ယောက်၁လေများသိသွားရင်ကျေနပ်ပါပြီ All Photo credit to original owner.
ယခုလ(၈)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဆုမဲသိန်း(၁၀၀၀)ဆုမဲ ❗️ကခ – ၁၂၃၅၉၃ ❗️ကိုကျွန်မတို့ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်မတို့သည် ယခုနံပါတ်ကို (၂၉.၉.၂၀၁၉)သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ် အမထံမှဝယ်ယူအားပေးခဲ့ပါသည်။ online မှတဆင့်ဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ထီလက်မှတ်မှာ ကျွန်မတို့၏လက်ထဲတွင်မရောက်လာသေးသော်လည်း ငွေကိုသူငယ်ချင်းထံသို့ပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ (၃၀.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမန္တလေးလာလျှင် ယူလာခဲ့ပါရန်မှာကြားထားသောကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည် သူ၏ကိုယ်စားလှယ်အမထံသို့ ထီလက်မှတ်သွားရောက်တောင်းယူချိန်တွင် အလုပ်ကိစ္စများအကြောင်းပြပြီး မပေးခဲ့ပါ။(၁.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ထီ ပေါက်စဉ်တိုက်ချိန်တွင်ကျွန်မတို့၏ ထီလက်မှတ်မှာ❗️သိန်း(၁၀၀၀)❗️ပေါက်မဲနံပါတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဝမ်းသာအားရဖြင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်အမသည် ကျွန်မတို့၏ပေါက်မဲလက်မှတ်ကိုထုတ်မပေးတော့ပဲ သူအပိုင်လုပ်ယူလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မတို့တွေ ကိုယ်စားလှယ်အမရှိရာအရပ်သို့ သွားရောက်ညှိနှိုင်းချိန်တွင် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များနှင့် အဆင်မပြေခဲ့ပါ။ ကျွန်မတို့ထံတွင် သက်သေအထောက်ထားအစုံအလင်ရှိပါလျှက်နှင့် ဘာကြောင့်များ မတရားသဖြင့်ခံခဲ့ရပါသလဲ?(ယခုအဖြစ်ပျက်များသည် အမှန်တကယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်)ကျွန်မတို့ရဲ့ ကံကကောင်းတာလား?ကံကဆိုးတာလား🙏🏻သူများရဲ့ကံတရားနဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးများစွာနှင့် ယခု မိသားစုပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်🙏🏻 ကျေးဇူးပြု၍ ဒီ video file လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပေးကြပါရှင်..🙏🏻 Credit-Zin Zin
နေ့တိုင်းထမင်းစားဆင်းချိန်မှာ ကိုယ့်အတန်းရှေ့သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာထမင်းလာစားတတ်တဲ့ 😍 Kg သာားးလေး
ဒီနေ့မနက် ရုံးသွားဖို့ ၃၃ ကျောက်တန်းကားကို သင်္ဘောကျင်း မှတ်တိုင်ကနေစီးတော့ ၀ါဆိုမှတ်တိုင်အရောက်မှာ ယောင်္ကျားသုံးယောက်တက်လာတယ်
ဒီနေ့မနက် ရုံးသွားဖို့ ၃၃ ကျောက်တန်းကားကို သင်္ဘောကျင်း မှတ်တိုင်ကနေစီးတော့ ၀ါဆိုမှတ်တိုင်အရောက်မှာ ယောင်္ကျားသုံးယောက်တက်လာတယ် သူတို့ကို သတိထားမိတယ်ဆိုတာက ကားထွက်ပြီး မှတ်တိုင်အကျော်မှ နောက်က အသဲသန်တားပြီး တက်လာတာ ကားကျပ်မှန်းသိနေတော့သူတို့အတွက် ဂွင်ပဲလေ နောက်တော့ ကားက အသေကျပ်တော့ ကားလက်တန်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်တဲ့ အချိန် သူတို့က ကိုယ့်ဖုန်းကို ခိုးသွားပြီ ကားကမင်္ဂလာဈေးနားရောက်တော့ လူတွေဆင်းပြီ နဲနဲရှင်းသွားတော့ ကိုယ့်အိတ်ကို ကြည့်မိတယ် ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ထဲက တယောက်က ဘာရှိဦးမလဲ ထပ်နှိုက်တဲ့အချိန် ကိုယ်မိရော ဖုန်းက အိတ်ထဲ လုံးဝမရှိတော့ဘူး ပြန်ပေးဖို့တောင်းတယ်မယူဘူး ဘူးခံ ငြင်းတာအသားကုန် သူ့အိတ်ထဲရှာကြည့်ပေါ့သူကပဲ ဖြူစင်သလိုပုံစံနဲ့ ကားသမားကို တံခါးပိတ်ထားပြီး ဘေးနားက အကိုကြီးတွေက ဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောတယ် အဲ့ဒီမှာ သူခိုးတစ်ကောင်က ဖုန်းကို ယူထားပြီး လက်တင်ကိုင်ထားတာ လိုက်ရှာပေးတဲ့အကိုကြီးတယောက်က ဒါညီမဖုန်းလားမေးတယ် ဟုတ်တယ်ဆိုရော အဲ့ကောင်ဆီက...